(၄၃)နှစ်မြောက် မွန်ပြည်နယ်နေ.အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပ - Yangon Media Group
(၄၃)နှစ်မြောက် မွန်ပြည်နယ်နေ.အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပ
မော်လမြိုင် မတ် ၁၉ ။ ။(၄၃)နှစ်မြောက် မွန်ပြည်နယ်နေ.အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနားကို မတ် ၁၉ရက်နေ. နံနက် ၅နာရီခွဲ တွင် မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို. ဖက်တန်းရပ် ကွက်ရှိသာသနာ.ဗိမာန်တော်၌ကျင်းပရာ မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအေးဇံနှင်.ဇနီး ၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဒေါ်တင်အိ၊ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဌဒေါက် တာအောင်နိုင်ဦး ၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ. ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ဖိတ်ကြားထားသော ဧည်.သည်တော် များ တက်ရောက်ကြည်ညိုကြပြီး ဆရာတော်ကိုးပါးတို.အားပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင်.တာဝန်ရှိသူ များကအရုဏ်ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူ ဒါန်းကာဆရာတော်ထံမှ တရားတော်များနာယူခဲ.ကြောင်းသိရသည်၊၊
ယင်းနောက် နံနက် ၈နာရီအချိန်တွင် မော်လမြိုင်မြို.ပြည်နယ်ခန်းမ၌( ၄၃) နှစ်မြောက် မွန်ပြည်နယ်နေ. အခမ်းအနားကိုကျင်းပ ရာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊.ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌနှင့်ပြည်နယ် ဝန်ကြီများ ကပြည်နယ်ဂုဏ်ထူးဆောင် ဆုရရှိကြသူများ နှင့်မွန်ပြည်နယ် အလှ ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွင်ပထမ၊ဒုတိယ ၊တတိယနှင်.အထူးဆု ရရှိကြသူများအားဂုဏ် ထူးဆောင်လက်မှတ် နှင်. ဂုဏ်ပြု ဆုများကိုပေးအပ်ချီးမြှင်.ကာမွန်ပြည်နယ်နေ.အထိမ်းအမှတ် တိုင်းရင်းသားရိုးရာအက ပဒေသာများဖြင်.တင်ဆက်ဖျော်ဖြေမှု ကိုကြည်.ရှုအားပေးခဲ .ကြောင်းသိရ သည်၊၊
(၄၃)နှစ်မြောက် မွန်ပြည်နယ်နေ.အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပသည့်မြင်ကွင်း ။ ဓာတ်ပုံ - ရဲကိုကို
ယင်းနောက်(၄၃)နှစ်မြောက် မွန်ပြည်နယ်နေ.အထိမ်းအမှတ်ပြခန်းဖွင်.ပွဲကို မော်လမြိုင်မြို. ဘိုကုန်းရပ် ရှိသံလွင် ဥယျာဉ်၌ နံနက် ၁၁နာရီတွင်ဆက်လက်ကျင်းပရာ(၄၃)နှစ်မြောက် မွန်ပြည်နယ်နေ.ကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီ ဥက္ကဌမွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဇံ၊ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဒေါ်တင်အိနှင်ပြခန်းခင်းကျင်းပြသရေးနှင်.ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ များကျင်းပရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ .ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ.ဝင် လျပ်စစ် စွမ်းအင်နှင်.စက်မှုဝန်ကြီးဦးမင်းထင်အောင်ဟန် တို.က ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင်.လှစ်ပေး ခဲ.ပြီးမွန်ပြည် နယ်နေ.အထိမ်း အမှတ် အဖြစ်ခင်း ကျင်းပြသထား သောဌာန ဆိုင်ရာပြခန်း များအားပြည်နယ်ဝန်ကြီး ချုပ်နှင်.အဖွဲ.က လှည်. လည်ကြည်. ရှူအားပေး ခဲ့ ကြောင်းသိရသည်၊၊
More in this category: « ရေယာဉ်များဆိုက်ကပ်ချိန် ရေယာဉ်ပေါ်စည်းကမ်းမဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့် ခရီးသွားများ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်နေရ ကျိုက္ကသာမြို့ဟောင်းတွင် မြေတူးရင်း ရွှေပြားများတူးဖော်တွေ့ရှိ »